‘राज्यले खुट्टा बाँधेर दौडन लगायो’ – Nepal Press
२०७७ माघ २ गते १३:२३
सुर्खेत । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतकी उपप्रमुख देवी आचार्य भट्टराईले चाहेर पनि खासै काम गर्न नसकेको गुनासो गरेकी छन् । तीनवर्षे कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘हाम्रो मर्यादाक्रम माथि भए पनि जिम्मेवारीका हिसाबले वडा सदस्यको भन्दा पनि कम छ ।’
उपप्रमुख आचार्यको तीनवर्षे जिसस उपप्रमुख हुँदाको अनुभव उनकै शब्दमा
तीन वर्षमा हामीले हरेक पालिका र प्रदेश सरकारले बनाएका योजनाको अनुगमन गरेका छौं । ती योजनाबारेमा प्रतिवेदन र सुझाव दिने काम पनि गरेका छौं । तर आमजनताले अहिले पनि जिल्ला विकास समिति जस्तै जिल्ला समन्वय समिति हो भन्ने बुझेका रहेछन् । वास्तवम यो तीन वर्ष त त्यही बुझउन ठिक्क जस्तै भयो ।
हिजो चुनावको समयमा हामीले पनि जनतासामू केहि प्रसतवद्धता जनाएका थियौं । हामीले ‘बाटो बनाउँछौं, शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्छौ, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँछौं । जनतालाई रोग, भोक र शोकमा पर्न दिँदैनौं’ भनेर नै मत मागेर जितेका थियौं ।
हामीलाई नौ वटै तहको बजेट बाँडफाँडको जिम्मा दिएको भए हुन्थ्यो । कोआर्डिनेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था दिएको भए हुन्थ्यो, तर भएन ।
नाम मात्रको अनुगमन !
जनतालाई के जवाफ दिने ?
समन्वय समिति खारेज गरियोस्
#जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत
प्रकाशित: २०७७ माघ २ गते १३:२३